Mogadishu Journal » 2019 » January » 5
Markab ay saaran yihiin boqolaal Konteenar oo ku soo xirtey dekeda Muqdisho
Mjournal :-Markab ay leedahay shirkada MAERSK LINE ee ah shirkada ugu weyn caalamka ee daabusha Konteerada ayaa maanta ku soo xirtey dekeda magaalada Muqdisho. Boqolaal konteenar ayaa saaran markabkan iyadoo maamulka dekeda Muqdishana uu sheegay in shirkadda MAERSK LINE ay si...
Tacadiyadii ka dhacay Baydhabo oo guddi xaqiiqo raadin ah loo saaray
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdficasiis Lafta-gareen ayaa waxa uu magacaabay guddi xaqiiqa raadin ah oo baaritaan ku sameynaya shaqaaqooyinkii ka dhacay Baydhabo. Shaqaaqooyinka ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa geystey qasaare isugu jira...
Xiriirka kubadda Cagta ee dalka Guinea ayaa hooyada dhashay laacibka Manchester United qadka dhexe uga dheela ee Paul Pogba u magacaawday safiirka kooxda Kubadda Cagta haweenka ee dalkaasi. Magacaabista Yeo Moriba ayaa imanaysa kadib markii ay kulan wada qaateen iyada iyo Mamadou...
Xidig Barcelona Ka tirsan oo qarka u saaran ku biiritaanka kooxda Arsenal
Kooxda kubada cagta ee Arsenal ayaa ku dhaw la soo wareegitaanka xidiga reer Spain ee Barcelona qadka dhexe kaga ciyaara ninka lagu magacaabo Denis Suarez. Unia emry ayaa baahi badan u qabo soo qaadashada ciyaariyahankaan qadka dhexe ka xamaasha kaasoo uu u arko mid wax weyn ka...
Jubbaland oo dhoolatus ciidan ku soo bandhigtay Kismaayo
Mjournal :-Maamulka Jubbaland ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ugu jirta duulaanka Gobolka Jubadda Dhexe, iyadoo maanta Kismaayo lagu soo bandhigay dhoolatus ciidan. Maxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam”Axmed Madoobe” oo ay weheliyaan Taliyayaasha...
Sharuudaha Musharixiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland oo la shaaciyay
Mjournal :-Guddiga doorashada Maamulka Puntland ayaa dhawaan magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamulkaasi kusoo bandhigay sharuudaha musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi u tartamaya. Musharixiinta ayaa waxaa maalinta Isniinta ina soo aadan ay...
Booliska Britain oo toogtay nin ay ka shakiyeen
Mjournal :-Booliska Britain ayaa toogtay mid kamid ah saddex nin oo ay ku raad joogeen, kadib markii ragaasi ay isku dayeen in ay ka baxsadaan Booliska. Howgalkaani ayaa waxa uu ka dhacay Magaalada Coventry ee gobolka West Minlands ee dhaca galbeedka Dalkaasi Biritain. Booliska...
QM oo Ergay cusub u soo magacaabaysa Soomaaliya
Mjournal :-Xogheyaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay inuu Soomaaliya usoo magacaabayo ergey cusub. ku-xigeenka afhayeenka Qaramada Midoobey Farhan Haq ayaa sheegay in tilaabada lagu ceyriyay Haysom ay ka xun yihiin. Warka kasoo baxay xoghayaha guud ayaa lagu sheegay in...